Ogow Dhacdooyinka Ugu Weynaa Bisha August Ciyaaraha Soomaaliya – Goobjoog News
Sacuudiga Oo Si Buuxda U Furay Masjika Barakeysan Ee Kacbada
Guriceel:- Ciidamada Xooga Dalka Iyo Kuwa Galmudug Oo wada Guluf ka dhan ah Shiikh Shaakir
Erdogan Oo Safar Ku Maraya Dalal Ka Tirsan Qaaradda Afrika
Jaamacadda Carabta Oo Soo Dhaweysay Go’aanka ICJ
Soomaaliya: Askar Tuuga Ah Oo Xukun Lagu Riday
Al-shabaab Oo Weerar Ku Qaaday Saldhig Ciidamada Puntland Ku Leeyihiin Gobalka Bari
Ogow Dhacdooyinka Ugu Weynaa Bisha August Ciyaaraha Soomaaliya
01-August 2019-Kooxda Mogdishu City Clup ayaa saxaafada usoo bandhigtay dhowr xidig kuwaas oo kala ahaa ajaaniba iyo kuwa u dhashay dalka qeybna ka ah olalah 2019-2020.
Xidiaha kusoo biiray waxa ay kala yihiin Wahiid oo dhashay Ghan,Remy oo isna kasoo jeed Uganda,Uche oo u dhashay Nigeria iyo Jacfar,Bakar oo kaga soo biiray Magaalada Jigjiga .
02-August 2019-Macallinkii hore Muqdisho City Club Hussein Mblangu ayaa magaalada Kampala kula kulmay ciyaartooyda kooxdiisii hore kuwaas oo qeyb ka ahaa safka Xulka Qaranka Soomaaliya ee ka qeybgalay tartanka African Nations Championship 2019.
03-August 2019-Xulka Soomaaliya ayaa gabi ahaanba ka haray tartanka Chan 2019, kaddib markii laba guuldaro oo kala kulmay dhigiisa Uganda,iyadoo xulkeena laga dhaliyay ilaa 7-gool labo ciyaareed oo ku kala dheelay wadamada Jabuuti iyo Uganda.
04-August 2019-Kooxda Xidigaha FC ee ka dhisan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ku guulaystay tartan lagu xusay legend Macallin Cabdullahi Xasan Saalax Tuke.
05-August 2019-Xidigaha xulka Qaranka Soomaaliya ayaa kusoo laabtay caasimada Muqdisho ka dib markii ay labo ciyaareed ay guul daro kala kulmeen Xulka Uganda.
06-August 2019-Madaxwaynaha Puntland Dr.Saciid Cabdilaahi Deni ayaa bixiyay balan qaadkii lacagta ahaa ee uu maamulkiisa ugu qeeyb qaadanayay dhismaha Garoonka Mire Awaare ee magaalada Garoowe, Wasiirka maaliyadda Puntland ayaa guddiga dhismaha garoonka Mire Awaare ku wareejiyay $100,000 dollar.
06-August 2019-Raysal Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa guddiga dhismaha garoonka Cabdullahi Ciise ku wareejiyay lacagtii uu balanqaaday ee cadadkeed aheyd $227,167 (Laba boqol Labatan todoba kun,boqol lixdan iyo todoba dollar),iyadoo guddiga dhismaha garoonka ay arintan ugu mahad celiyeen Raysal Wasaaraha
07-Auguts 2019-Kooxaha Kubbadda cagta Muqdisho City Club iyo Dekedda ayaa u safartay dalalka Zanzibar iyo Egypt waxayna halkaa u kala aadeen ka qeybgalka tartamada CAf Confedration iyo CAF Champions League
08-August 2019-Baydhabo waxaa lagusoo gabagabeeyey tartanka South West Super League 2019 oo aheyd markii ugu horeesay loo qabto naadiyada u diiwaangashan Xiriirka Kubbadda Cagta Koonfur Galbeed waxaana kaabkan hantay xidigaha FC Suuqa Xoolaha.
09-August 2019-Dowalladda Soomaaliya ayaa magacii garoonka Stadium Banaadir ee degmada Cabadi Casiis ku badashay Alle ha u naxariistee Marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Inj.Yariisow),Madaxweyne Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in garoonka loo bixiyay Eng.Yariisow Stadium.
10-August 2019-Guddiga dhismaha garoonka Cabdullahi Ciise ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay guddoomiyaha xiriirka kubbadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab wuxuuna guddiga ka warbixiyay halka uu marayo dhismaha iyo qorshayaasha garoonka la doonayo ee loo qaabeeyo.
11-August 2019-Xidigaha Dowlladda hoose ee Muqdisho City Club ayaa kulankii 1-aad ee tartanka kooxaha Caf Confedration barbaro la galay naadiga reer Zanzibar ee Malindi Sports Club waxayna aheyd 30-sano.
12-August 2019-Guddoomiye ku xigeenka 2-aad ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubbadda cagta Cabdullahi Sheekh Nuur Axmed ayaa xerada farsamada ee garoonka Jaamacadaha ku booqday xulka 15-jirada,isagoo kula dardaarmay in ay si wanaagsan u qaataan casharadii la baray maadama ay yihiin mustaqbalka Soomaaliya.
13-Agust 2019-Guddoomiyaasha kooxaha Horseed iyo Elman DR.Maxamed Axmed Maxamed iyo Cabdirisaaq Faarax Cumar (Garooje) ayaa kulan baraarujin iyo dhiiri-gelin la qaatay xulka 15-jirada ee markii horeesay nasiibka u yeeshay in matalaan Soomaaliya.
13-August 2019-Xidigaha Xulka Qaranka 15 Jirada ayaa uu safray magaalada Asmara ee daka Eretria,iyagoo ka qeybgalay tartanka briga iyo bartamaha Afrika ee Cecafa Under 15 oo markii ugu horeesay la qabtay.
14-August 2019-Kooxda Horseed ee ciidanka xoogga dalka ayaa u safartay wadanka Morocco,iyagoo 32- kadib ka qeybgalay tartanka Jamaacada Carabta oo sanadkan lagu qabtay magaalada casablanca,maamulka kooxda Horseed waxa ay sheegeen in ay aad ugu faraxsanyihiin mudo dheer ka dib in ay kusoo laabtaan.
15-August 2019-Raysal Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa xafiiska ku qaabilay Guddoomiyaha Xiriirka kubbadda cagta Galmudug Cabdifataax Cabdullahi Warsame iyo guddiga dhismayaasha garoomada kubbadda cagta degmooyinka Cadaado iyo Gaalkacyo,isagoo ku wareejiyay lacagtii uu balanqaaday ee aheyd kaabida dhismayaasha labada garoon,dhallinyarada iyo bahda ciyaaraha Galmudug ayaa arinta kaga mahadceliyay Raysalwaasaraha xukuumada Fedraalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre.
16-August 2019-Xulalka 15 Jirada Soomaaliya iyo Kenya ayaa wada dheelay tartanka da’yarta Bariga iyo Bartamaha Afrika ee ka dhacay wadanka Eretrie kulankaa ayaa ahaa furitaanka ciyaaraha Cecafa Under 15.
17-August 2019-Bahda isboortiga degmada Cadaado ayaa kulan mahad celin ku qabtay garoonka Caadaado wuxuuna u jeedkooda ahaa in ay mahadcelinayaan Raysal Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo bixiyay lacag uu ugu talagalay dhismaha garoonka Cadadaado waxaana cadadka lacagtaa lagu qeexay $145,500 Dollar.
18-Auguts 2019-Guddoomiyaha Garsoorka Xasan Yabarow Wiish iyo Guddoomiye ku xigeenka garsoorka Aweys Cabdullaahi Sheekh ayaa u safray dalka Rwanda,iyagoo halkaa ugu qeyb galay tababar ay FIFA u qabatay hogaanka garsoorka Wadamada Qaarada Afrika wuxuuna socdaalkaan u ahaa kowaadii 1-aad
19-August 2019-Guddoomiyaha kooxda Elman Cabdirisaaq Faarax Cumar (Garooje) oo safar shaqo ku tagay degmada Diinsoor ee Gobolka Baay ayaa sheegay in degmada Diinsoor ay helayso mashaariic horomarneyd.
20-August 2019-Xiriirka Kubbadda cagta Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay horomarka ay kooxaha dalka ku tilaabsadeen ka dib markii sanadkan ilaa afar naadi ay ka qeybgaleen tartanka Caf Champians League,Caf Confederation,Arab League iyo tartanka kooxaha Bariga iyo Bartamaha Afrika waxayna madaxda xiriirka sheegeen in horomarka dhinaca dibadda ay sii socdaan tani ay kor u qaadeeso horomarka kubbadda cagta .
23-August 2019-Dhallinyarada 15 Jirada Soomaaliya Iyo Eretria ayaa barbaro ku heshiiyay,iyagoo wada dheelay kulamadoodii ugu danbeeyay heerka is araga Groupyada tartanka xulalka da’yarta Bariga iyo Bartmaha.
24-August 2019-Aweys Nuur Axmed iyo Cabdi Cabdulle Basaale oo ka mid ah macallimiinta garsoorayaasha kubbadda cagta Soomaaliya ayaa u safray wadanka Ruwanda,iyagoo halkaa ku aaday aqoon kordhinta xirfada
25-August 2019-Degmada Hodon ayaa iska xaadirisay fiinaalaha tartanka bubbadda Gacanta Degmooyinka Gobolka 2019, ka dib markii Sem Finalka ay ka adkaatay Warta Nabbadda.
26-August 2019-Xiriirka kubbadda cagta Soomaaliya ayaa Saciid Cabdi Haybe u magacaabay safiirka iyo madaxa soo aruurinta ciyaaryahanada qurbajoogta kuwaas oo ka qeybqaadanaya horomarka xulka qaranka .
27-August 2019-Degmada Shibis ayaa usoo baxay fiiinaalka tartanka kubbadda Gacanta degmooyinka Gobolka Banaadir 2019 kadib markii ay guul ay si dirqi ah kaga adkaatay kooxda degmada Wadajir.
28-August 2019-Ciyaartooydii Jeenyo ee iminka u dheela kooxaha kala duwan ee Soomaaliya ayaa aad ugu xumaaday in kooxdoodii hore ay u laabto heerka 2-aad Soomaaliya,balse u rajeeyay horomar wanaagsan.
29-August 2019-Guddoomiye ku xigeenka 2-aad ee Xiriirka Soomaaliyeed ee kubbadda cagta Cabdullahi Sheekh Nuur Axmed ayaa xulka 15 jirada kaga mahad celiyay shaqadii wanaagsaneed ay kusoo bandhigeen wadanka Eretria oo sanadkan marti geliyay tartanka 15 Jirada Bariga iyo Bartamaha Afrika 2019 ee Ceacafa.
30-August 2019-Xulka 15 Jirada ee markii ugu horeesay ka qeyb galay ciyaaraha da’yarta Bariga iyo Bartamaha Afrika ayaa kusoo laabtay Muqdisho waxaana si weyn u soo dhaweeyay xiriirka kubbadda cagta iyo qaar ka mid ah waalidiintooda waxaana looga mahad da’daalka ay kusoo bandhigeenka wadanka Eritrea.
31-Auguts 2019-Xariirka kubbadda cagta Soomaaliya ayaa is badal weyn ku sameeyay shaxda xulka Qaranka waxaana markii ugu horeesay safka xulka loogu yeeary ilaa 10-ciyaartooy oo ka dheela caalamka waxaana talaabadan soo dhaweeyay bahd kubbadda cagta.
Halkan Ka Daawo Warbixinta Dhacdooyinka Bisha August 2019 Oo Muuqaal Ah
Dowladda Federaalka Ah oo Laga Diiday in Ciidamo Aradan Ka Qaado Hiiraan
Xisbiyada Mucaaradka Somalinad oo War Ka Soo Saaray Doorashada
Kulan Dhexmaray Taliska Qaybta 21aad iyo Hiil-walaal
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, shirkadaha...
Kaydka Goobjoog Select Month October 2021 (86) September 2021 (194) August 2021 (169) July 2021 (150) June 2021 (128) May 2021 (125) April 2021 (158) March 2021 (182) February 2021 (165) January 2021 (255) December 2020 (267) November 2020 (166) October 2020 (168) September 2020 (153) August 2020 (263) July 2020 (352) June 2020 (511) May 2020 (307) April 2020 (264) March 2020 (227) February 2020 (211) January 2020 (171) December 2019 (174) November 2019 (153) October 2019 (168) September 2019 (169) August 2019 (238) July 2019 (230) June 2019 (233) May 2019 (236) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (365) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)